एउटा महान् प्रेमकथा (जस्को हातखुट्टा छैन) फोटो फिचर सहित::netpatrika
एउटा महान् प्रेमकथा (जस्को हातखुट्टा छैन) फोटो फिचर सहित
बिहिबार, बैशाख ११, २०७१
यो कुनै काल्पनिक प्रेमकथा होइन । वास्तविक कथा हो तर कुनै पनि महान् कथाकारले लेखेभन्दा धेरै महान् प्रेमकथा । यो प्रेमकथा हो, निक भुजिसिक र उनकी श्रीमती कने मियाहाराको । यीनको कथा इन्टरनेटभरी डँढेलोझैँ फैलिएको छ र फैलिरहने निश्चित छ । निक विना हातखुट्टा बिनानै यो र्धिर्तमा जन्मे । र, उनले आफुले प्रेमिका पाउने कुरा कहिल्यै सोेचेनन् , जोसँग पुरा जिन्दगी बिताउन पाइयोस् ।
‘मलाई पटक्कै विश्वास थिएन, मैले कुनै दिन कोही भेटाउने छु जो मँसँग सारा जिन्दगी बिताउन तयार होस् ।’ उनले केही पहिला एउटा अन्तरवार्ताका क्रममा भनेका छन् । १० वर्षको उमेरमा निकले आत्महत्याको असफल प्रयास गरे तर त्यसपछि भने कहिल्यै पछाडी फर्केर हेरेनन् । आत्मविश्वास बढाउँदै लगे । हार नमान्ने प्रण लिए । जित्छु भन्ने भिष्मप्रतिज्ञा गरे ।
अनि त एक दिन उनले आफ्नो राजकुमारी कनेलाई भेटाए । पहिलो झमटमै उनिहरुले एक अर्कालाई मन पराए । ‘जस्तो रुपमा उनी छन् , त्यही रुपमा मैले उनलाई मन पराएँ । मैले शारिरीक भोकलाई प्राथमिक ठानेर त्यो भन्दा पहिले अर्को केटासँग सम्वन्ध स्थापित गरेको थिएँ तर मलाई दिक्क लाग्यो । मैले जे खोजेको थिएँ , निकबाट पाएँ ।’ कने भन्छिन्, ‘उ भौतिक रुपमा मात्रै मेरो पति होइन, आत्मिय रुपमा पनि मेरै ।’ जब उनले निकलाई २००८ मा भेटिन् , उनलाई निकको आत्मविश्वास र हँसाउने कलाले मोहित पायो । ‘उ ह्यान्ड्सम र मेरा लागी योग्य बर थियो ।’ निकलाई पनि त्यस्तै लाग्यो । भन्छन्, ‘चट्याङ परेजस्तो । यो केटी मेरी नै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । नभन्दै..।’
विवाहको प्रस्ताव आयो । पश्चिमा मुलुकमा विवाहको प्रस्तावका लागि औँठी लगाउने चलन छ । धेरैले ठान्लान् , निकले कसरी औँठी लगाइदिए ? तर, यो समस्याको समाधान पनि भयो । निकले अनौठो तरिका निकालिहाले । ‘प्रिय के म तिम्रो हातलाई चुम्न सक्छु ?’ उनले कनेलाई सोेधे । कनेले ठानिन् , निक उनको औँलामा किस गर्दैछन् । तर निकले औठी मुखमा राखेका थिए र जब उनले कनेलाई चुमेझैँ गरे, औठी पनि ठ्याक्कै औालाभित्र पसिहाल्यो । अनि उनले संवत २०१२ मा विहे गरे ।
‘प्रिय म तिमीलाई माया गर्छु र तिमी के मसँग पुरा जिन्दगी बिताउन तयार छौ ?’ कने भावविह्वल भइन् । आँशु मोती बने ।
कतिलाई लाग्दो हो, निकको शारिरीक अशक्तताको कारण उनीहरुको सम्वन्धमा अप्ठ्यारोपना त आउँदैन ? निक भन्छन् ,‘केही समस्या छैन । ओहो, त्यस्तो छँदै छैन । हामी एक अर्काप्रति बहुत आशक्त छौँ ।’ कने भन्छिन् । ‘उसलाई र मलाई आवश्यक सबै चिज उसँग छ ।’ विहा गरिसकेपछी उनिहरुले अमेरिकाको दक्षिण क्यालिफोर्नियामा घरजम गरे । निक प्रेरणा र आत्मविश्वासका बारेमा लेख र भाषण गर्दै संसार डुल्छन् । कने एउटी असल श्रीमतीका रुपमा घरमै काम गर्छिन् ।
खुशीमाथी अर्को खुशीको कुरो, एक दिन कने गर्भवति भइन् र एउटा स्वस्थ बच्चालाई जन्म दिइन् । निक १९८२ अस्टेलियाको मेल्बर्नमा जन्मे । आप्नै प्रयत्नमा १७ वर्षमा लाइफ विदवाउट लिम्ब नामको संस्था स्थापना गरे । उनको खुट्टा नभएपनि दुइटा पाइताला छन् र एउटा पाइतालमा दुइवटा औँला छन् । ३२ वर्षे यी युवाले प्रेरणा सम्वन्धि भाषण गर्दै विश्वका दर्जनौँ देश घुमिसकेका छन् । लाखौँका श्रोतामाझ आफ्नो अनुभव साटेका छन्
कोलोम्बो- श्रीलङ्काको दक्षिणी भागमा पर्ने गल्ले जिल्लामा शुक्रबार रातिबाट सुरु भएको हिंसात्मक झडपमा कम्तीमा १९ जना पक्राउ परेका छन् । हिंसात्मक क्रियाकलापको कारण शुक्रबार रातिबाट लगाइएको कफर््यु शनिबार खुल्ला गरिएको बताइएको छ । गल्ले जिल्लाको छ वटा इलाकामा कफर््यु लगाइएको श्रीलङ्काली प्रहरीले शनिबार जानकारी दिएको छ । कफर््यु हटाइएपनि सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सम्बेदनशिल मानिएका ती इलाकाहरुमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको समाचारमा बताइएको छ । शुक्रबार...
कतारमा पत्रकार महेन्द्र पोखरेल सम्मानित
दोहा/कतार । बिगत दशक देखी पत्रकारीतमा सँलग्न रही बिभिन्न प्रिन्ट तथा अनलाईन मिडियामा आबद्द रहँदै आएका पत्रकार महेन्द्र प्रसाद पोखरेल एम पि कतारमा सम्मानित भएका छन । काभ्रेपलाञ्चोक सेवासमाजको बार्सिक उत्सब समारोहमा पत्रकार पोखरेललाई समाजले सम्मान गरेको हो । पत्रकार पोखरेल नेपाल पत्रकार महासँघ कतार साखाको कार्यसमिती सदस्य समेत हुन । पत्रकार पोखरेलको उपन्यास आजको प्रेम र गजल सँग्रह पुकार प्रकासित छन भने कतारबाट तत्कालीन प्रकासित हुने...
उत्तर कोरियासँग बच्न दक्षिणकोरियाले चाल्यो यस्तो कदम
सोल, दक्षिण कोरिया/एएफ्पी – उत्तर कोरियाली आणविक हतियारको चुनौतिबाट सुरक्षाका लागि दक्षिण कोरियाले अमेरिकासँग अर्बौँ अमेरिकी डलर बराबरको हतियार खरिद गर्ने भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबारको कोरियाली अधिकारीसँगको भेटपछि बताउनुभएको छ । दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जाइ–इनसँगको भेटपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो,“ दक्षिण कोरियाको मुख्य सुरक्षा सहयोगी अमेरिकाले सोलको व्यालिस्टिक मिसाइलमा रहेको अघिललो भागको वजनलाई घटाउने सहमति पनि भएको बताउनुभयो । उत्तर कोरियाली...